ADEEGYADA | Jiangsu Kaichuang International Trade Co., Ltd.
Wax walba oo aan sameyno, kaliya waxaan u ogolaaneynaa macaamiisha inay ka helaan faa iidooyin badan suuqa si ay u helaan fursado badan oo ganacsi si ay ugu abuuraan qiimo badan macaamiisheena iyo bulshada.
"U jahaysan macaamiisha", waxaan siineynaa adeegyo tayo leh oo buuxa oo loogu talagalay macaamiisheena.
Kormeer Muunad Bilaash ah
Sii Muunado Tijaabo ah
Jawaab La-Tashiga Farsamada
Aqbalida Codsiyada Adeegyada
U hogaansanaanta "qanacsanaanta macaamilka oo ah diiradda, hagaajinta tayada joogtada ah, raacdada tayada heer sare" siyaasada tayada.Soo xoojinta waxsoosaarka wax soo saarka iyo habab kormeer ah. Ku foog fiirso hagaajinta tartanka asaasiga ah ee shirkadaha. Kormeerka wax soosaarka Iyadoo si adag loo waafajinayo heerarka tayada qaranka. Iyada oo loo marayo xakamaynta qadka wax soo saarka, nidaam kasta is-kormeerkiisa, hubinta wadajirka ah iyo kormeerka nus dhammaadka ah, kormeerka alaabooyinka dhammeeyey si loo hubiyo in badeecad waliba ay tahay mid la isku halleyn karo oo tayo sare leh.Win sumcadda laga helo macaamiisha iyo suuqa hogaamiyaha warshadaha qaranka ee aluminium.
Tijaabinta adag, Hawlgal Ammaan ah
Mingtai wuxuu la kulmayaa baahiyaha isticmaalaha iyadoo la maareynayo geeddi-socodka oo dhan, laga bilaabo soo iibsiga aluminium, soosaarida,
hubinta geedi socodka, kaas oo bixiya amniga dadka isticmaala.
Laga soo bilaabo Amarka ilaa Bixinta
Qandaraaska iibka, amarka kormeeraha amarku wuxuu hubiyaa moodooyinka iyo tirada aluminium aluminium.
Tijaabada Tayada Ka Hor Bixinta
Kadib dhammeystirka wax soo saarka badeecada, kormeeraha tayada waa inuu si adag u hubiyaa tayada qayb kasta oo badeecooyin ah, sawirro ka qaadaa oo u diraa macaamiisha.
Hubi Alaabta Marka Aad Xirxireyso
Kahor xirxirida iyo rarka, amarka daba-galka amarka wuxuu hubiyaa walxaha baakadeysan markale liiska xirxirka si looga fogaado luminta waxyaabaha.
Qaado baakadaha alwaaxda ah si aad uhesho aluminiumka aluminiumka, looga hortago oksaydhka aluminium aluminium, oo dammaanad qaad bixinta ugu fiican ee alaabada sida ugu dhakhsaha badan, ugu amniga badan uguna kalsoonida badan.
Laga soo bilaabo qorshaha sameynta ilaa imtixaanka goobta macaamiisha, waxaan siineynaa macaamiisha nidaam adeeg oo qumman oo sameysma dhameystir, tayo seddex-cabbir leh, taasoo ka dhigeysa macaamiisha inay la kulmaan taajirnimo iyo kaamilnaan badan.
La-tashiga alaabta: Aqbalaadda la-tashiga adeegga 365 maalmood sanadkii.
Kooxda farsamada adag: Xalalka farsamada ee hufan ayaa adiga laguugu talagalay.
Siyaabo kala duwan oo naloo helo: E-mayl, Tel, Skype, Facebook, Twitter, Linkedin, Chat Online ...
Adeeg inta lagu jiro iibka
* Dhirta wax soo saarka aad u caqli badan.
* Si joogto ah uga jawaab celinta horumarka sheyga.
* Tijaabooyin adag kahor kahor intaan loo dirin macaamiisha.
Maareeyaha iibka oo tayo sare iyo khibrad leh ayaa ku siin doona talo soo jeedin badeecad gaar ah iyo nidaamka oraah ka dib markaad si fiican u baratid shuruudahaaga. Kadib amar bixinta, warshada casriga waxay kuu soo saartaa alaab tayo sare leh adiga, iyo iyada oo loo marayo waaxda kormeerka, waaxda kormeerka tayada iyo lakabyada kale ee jeegaga, si loo hubiyo in tayada wax soo saarku ay buuxineyso shuruudaha qaranka iyo macaamiisha.
Kooxda adeegga iibka kadib waxay kuu diyaarin doonaan shixnad xirfadeed oo adiga kugu habboon adiga oo dabagal ku sameeya nidaamka oo dhan si loo hubiyo badqabka alaabtaada; haddii aad leedahay baahiyo soo iibsi oo soo noqnoqday, kooxda adeegga iibka kadib ayaa kuu diyaarin doonta kayd joogto ah; haddii aad su'aalo ka qabtid tayada wax soo saarka, kooxda adeegga iibka kadib waxay kuu soo saari doonaan xalal sida ugu dhakhsaha badan.
Kaichuang aluminium waxay ku siinaysaa geedi socod buuxa, adeeg isku dhafan iyo khamri. Amar kasta, laga bilaabo la-tashiga iibka ka hor illaa bixinta iibka kadib, waxaan ku raad joognaa waqtigeeda si aan u hubinno in macaamiisha ay u heli karaan alaabada si badbaado leh, adeega kalkaaliyaha, kalsoonida, kalsoonida badan.We soo dhaweyn macaamiisha si ay u soo booqdaan warshadeena. Oo waxaan ku bixin karnaa muunad bilaash ah. Habka tijaabada wax soo saarka, waxaan u abaabulnaa baaritaanka wax soo saarka iyadoo la raacayo heerarka caalamiga ah. Iyada oo loo marayo hubinta taxaddarka adag ee wax soo saarka habraac kasta oo is-kormeer ah, jeeg wadaag iyo kormeer dhammeystiran, kormeerka alaabooyinka dhammaaday, Waxaan hubineynaa in qayb kasta oo ka mid ah alaabteennu ay tahay mid la isku halleyn karo. Kulan toddobaad kasta, si loo helo dhibaatooyin, u xalliso adeeg wanaagsan. Haddii taarikadayada aluminium ay leeyihiin wax dhibaato ah oo tayo leh, waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican ee aan ku xallin karno taas.
qiimaha aluminium jeeg jeeg, Waraaqaha Aluminium ee jaban, daawaha aluminium 6061 qiimaha, Alaab-qeybiyeyaasha Birta ah ee Anodized Aluminium, Tread Tread Aluminum Aluminium, 7050 sheet aluminium,